Jurgen Klopp oo laga saarayo gurigii uu ka degganaa Magaalada Liverpool, maalmo yar kaddib markii uu ku guuleystay Champions League – Gool FM
(Liverpool) 06 Juunyo 2019. Maalmo yar kaddib markii uu ku guuleystay Champions League macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa laga saarayaa gurigii uu ka degganaa Magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska.
Hoggaamiyaha reer Jarmal ayaa degganaa guri uu ka kireystay xaafadda Formby, kaasoo uu isla leeyahay tababarihii uu shaqada ka bedelay ee Brendan Rodgers oo iminka macallin u ah naadiga Liecester City.
Sida ay sheegeyso Jariiradda Daily Mirror, Tababare Brendan Rodgers ayaa waxa uu dhawaan guri ku fadhiya 5 milyan oo gini ka iibsaday Magaalada Liecester City, waxaana uu haatan doonayaa inuu iska iibiyo gurigii uu ku lahaa Magaalada Liverpool, taasoo sababaysa in Klopp uu meesha guri ka raadsado.
“Brendan waxa uu doonayaa inuu ku nagaado in badan Leicester, sidaasi awgeed, waxa uu go’aansaday inuu guri iibsado halkii uu kiro ku jiri lahaa, acquulna ma’ahan inuu wada haysto labo guri waa wayn oo ku kala yaala labo Magaalo.” ayaa lagu yiri ilo wareedyo ay soo xigtay Jariiradda Daily Mirror.
51-sano jirkaan Klopp ayaa gurigaan hadda laga saarayo waxa uu ka kireystay ninka gurigaan iska leh oo uu ka bedelay shaqada Liverpool sanadkii 2015-kii.
Gurigaan oo uu hore u lahaan jiray kabtankii hore ee kooxda Liverpool, Steven Gerrard ayaa ka kooban 7 qol oo jiif ah.
Macallin Klopp ayaa ku qasban inuu iminka raadsado guri kale oo uu kireysto ka hor inta aan la iibinin guriga uu haatan deggan yahay oo uu macallin Brendan Rodgers milkiyaddiisa leeyahay.